၁ နှစ် - လိင်သည်သင်၏အံ့ feels စရာကောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ယခင်ဆက်ဆံရေး - သင်၏ Brain On Porn ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်
၁ နှစ် - လိင်သည်ကျွန်ုပ်၏ယခင်ဆက်ဆံရေးများထက်ယခု ပို၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်
တဦးတည်းအပြည့်အဝနှစ်တွင်: ဒါနဲ့့လာမယ့်မှတ်တိုင်လွန်! ငါခဏပြန် http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/90cycfc/1_day_report_my_journey/ မှာ 90 နေ့ကအစီရင်ခံစာတင်ခဲ့သည်။ ငါ 90 ရက်ပေါင်းအတိတ်အလွန်များစွာသော updates များကိုမြင်ကြပြီမဟုတ်, ငါ, ငါ့ nofap အတွေ့အကြုံကို ထိုအချိန်မှစ. ခဲ့ပုံကိုတခုတခုအပေါ်မှာ update ကို post ချင်တယ်။
90 ရက်ပေါင်းမီ, ငါ flatlining နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင် horny ဖြစ်ခြင်းတို့အကြားကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်၏တစ်ဖွဲ့လုံးတစည်းရှောက်သွားလေ၏။ ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်ဒါယူတာပဲ။ အဘယ်သူမျှမပြုလုပ်ငြင်းပယ်ရှိပါသည်။ တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအချိန် fapping စဉ်းစားပဲခုခံတွန်းလှန်ခဲ့ရတယ်။ ငါတကယ်ကြောင်းရက်သတ္တပတ်ကနေတဆင့်အောင်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ခြင်းနှင့်ကင်လုပ်ခိုင်းနဲ့တူတပြင်လုံးကိုအချိန်ခံစားရတယ်။ ငါသည်အဦးဆုံးသောရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအတိတ်လုပ်သည့်အခါကအကြီးခံစားရတယ်။ FAP ဖို့တိုက်တွန်းတဖြည်းဖြည်းကွယ်ပျောက် သွား. ငါလွတ်မြောက်သလိုခံစားရတယ်။ သို့သျောလညျး, နေ့ 20 သို့မဟုတ်ဒီတော့န်းကျင်ငါကွော flatline ဝင်ကြ၏။
အဆိုပါ flatlining မျိုးကြောက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအခြေခံအားဖြင့်ထိုကာလအတွင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာမျှမခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ငါ FAP ဖို့တိုက်တွန်းရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, ဒါပေမယ့်ငါသည်လည်းစစ်မှန်သောအသက်တာ၌မိန်းကလေးတွေဆိုဆွဲဆောင်မှုမခံစားရဘူး။ ဤနေရာတွင်အပေါ်လူတိုင်းကသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထိုသို့ပြုကြသည်ဟုပြောသည်ကတည်းကငါကအတူ flyer ။ ငါ့အဘို့က (ရက် 20-50ish) တစ်လအကြောင်းကိုကြာမြင့်ခြင်းနှင့်ပြီးကတည်းကပြန်မလာခဲ့သည်။ သောနောက်ထိုကာလကယ့်ကိုပြင်းထန်သောခဲ့, ငါမယုံနိုင်လောက်အောင် horny ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါပဲနာရီပေါင်းများစွာအဘို့အပျောက်မသွားခဲ့ပါဘူးတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုမြင်လျှင်နေလားရတယ်ရှိရာ flatline အဆုံးသတ်မကြာမီပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်။ ထိုကာလအားဖြင့်, က fapping ခုခံတွန်းလှန်ဖို့ခက်လွန်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကျွန်မအလွန်အမင်းနှိုးဆော်ခြင်းတယ်နေစဉ်, ငါမရှိသလောက်တကယ် FAP ဖို့တိုက်တွန်းတယ်။ အဲဒီမှာ relapsing နီးစပ်လာသောအခါအကြိမ်ခဲ့ကြသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ရှောင်ရှားရန်တော်တော်လွယ်ကူပါတယ်ခဲ့ကြသည်သူတို့ဘယ်နေရာမှာငါသည်အဦးဆုံးသောရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအတွက်ရှိခြင်းသတိရသောရမ္မက်အနီးရှိကြ၏။ အဆိုပါ horniness စမှာအစွန်းရောက်ခဲ့ပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းအထဲကအနိစ္စရောက်လေ၏။ ငါကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြည်နယ်ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း, ထိုသို့အစဉ်အဆက်ကတည်းကန်းကျင်ရှိ plateaued ထားပါတယ်တူသောနေ့က 90 သို့မဟုတ်ဒီတော့နောက်မှငါခံစားရတယ်။ ငါလှပတဲ့မိန်းကလေးကိုမြင်သောအခါအခုတော့ငါကျိန်းသေတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုခံစားရပေမယ့်ငါအရူးလားမရကြဘူး။ ဒါဟာသဘာဝကခံစားရပါတယ်။
ငါ nofap စတင်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့အသောအချိန်တဝိုက်အတော်လေးအနည်းငယ်စိုစွတ်သောအိပ်မက်အဖြစ်ကောင်းစွာပယ် tapered ရှိသည်ဟုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါကအနည်းဆုံးလအနည်းငယ်အကြာပါပြီရမယ်, နောက်ဆုံးတဦးတည်းမအောက်မေ့နိုင်ပါ။
ငါတော့ဘူး FAP ရန်မလိုသောဆန္ဒရှိသည်။ Fapping တကယ်လိုက်တယ်ပုံရသည်။ တစ်နှစ်၏သင်တန်းကျော်, ငါကျိန်းသေမတော်တဆ porn ပေါ်သို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာလဲကြပြီ။ ဒါကြောင့်အင်တာနက်ကိုပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်များတွင်ရှိမရှိ, ကလုံးဝအဝတ်အချည်းစည်းကလူကိုမြင်လျှင်ရှောင်ရှားရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ ငါကျပန်း porn တကယ်အထူးသဖြင့်ရက်ပေါင်း 50-90 န်းကျင်အများအပြား nofappers များအတွက်ကြီးမားသောအန္တရာယ်, ကြောင်းကိုထင်ပါတယ်။ ငါကွန်ပျူတာများနှင့်အတူအတော်လေးကောင်းသောပေါ့, ငါကအမြဲတမ်းသူတို့လုပ်နေတာနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုလှည့်ပတ်ရရနေကြတယ်ဆိုတာသိကတည်းက filter များငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးဘူး။ ကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်အားကိုးခဲ့ရသည်။ reddit အပေါ် Going အလွန်အန္တရာယ်များသောဖြစ်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းမှာ, ငါတကယ်ငါ relapse မှကျရောက်နေတဲ့ခဲ့ကြောင်းသိကတည်းက, ငါ့ screen ပေါ်မှာညစ်ညမ်းပြပွဲတက်ခွင့်ဘယ်တော့မှအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျွန်မမတော်တဆဖြတ်ပြီးထိ မိ. လဲသောသူအချို့ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံအားဖြင့်နှိုးဆွရစေခြင်းငှါအနေဖြင့်ယခု, ငါ masturbate မှမဆိုအလိုဆန္ဒမရှိကြပါဘူး။ ချွတ် jerking ၏စိတ်ကူးရုံမှာအားလုံးစိတ်ကိုမကူးဘူး။ ငါတကယ်ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်အဘို့သတိထားပါခဲ့ပေမယ့်ငါကတစ်ဦးကျခံထားပါလိမ့်မယ်နဲ့တူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခံစားရရှိရာအမှတ်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။
ငါက "အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ" တွင်မယုံကြည်ကြဘူး။ သင်တစ်ပါတ်အတွင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးဘုရားဖြစ်မယ့်ဖြစ်ကြောင်းမြော်လင့်နှင့်အတူသွားလျှင်, ထို့နောက်သင်သည် nofap ထဲကဘာမှမရသွားကြသည်မဟုတ်။ သင်ကိုယ်တိုင်တိုးတက်အောင်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါအတိတ်တစ်နှစ်ကျော်တစ်ဦးအစောပိုင်းကအချိန်ငါ့အိပ်ရာဝင်ချိန်ပြောင်းလဲကျွန်မပိုပြီးလေ့ကျင့်ခန်းပြီနဲ့ကျွန်မသိသိသာသာငါအင်တာနက်ပေါ်သုံးဖြုန်းထိုကာလ၏ပမာဏကိုလျော့နည်းသွားခဲ့ကြသည်။ ယေဘုယျအားငါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကရှိရာထက်အခုအသက်တာ၌ဖြစ်၏ဘယ်မှာအများကြီးပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
ငါ (တက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ့ရအပေါင်းတို့နှင့်တကွနေရာအပေါ်မှာရွေ့လျား) ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်းဘဝမှာတချို့အဓိကအပြောင်းအလဲများရှိခဲ့ကြောင့်အများစုတို့အတွက်ချိန်းတွေ့မခံခဲ့ရပါဘူး။ ငါလအနည်းငယ်အကြာနောက်တဖန်ချိန်းတွေ့စတင်ခဲ့ပြီး, ငါယခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ရည်းစားရရှိပါသည်။ nofap တစ်ခုမှာဆိုးကျိုးကိုသင်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူဖြစ်ကြပြီးလအတွင်းမလာသောအခါသင်တို့သည်အလွန်အထိခိုက်မခံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါသည်ငါ့ဘောင်းဘီထဲမှာငါသူမ၏နှင့်အတူအိပ်ရာအတွက်ဘာမှလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သောပထမဦးဆုံးစုံတွဲကြိမ်ရောက်လေ၏။ ကျွန်မနည်းနည်းရှက်ခဲ့ပေမယ့်ငါအကြောင်းပြချက်ငါနှစျတှငျချွတ်လာတတ်သည်မဟုတ်ခဲ့ကွောငျးခဲ့ကြောင်းသူမ၏သို့ပြောသည်။ သူမသည်ရုံရယ်, ငါနည်းနည်းအရူးထင်ပေမယ့်နှင့်အတူလုံးဝဒဏ်ငွေဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအကြိမ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပုံမှန်ပြန်ရတယ်။ အချို့လူများကရက်စွဲတစ်ခုမတိုင်မီတဦးတည်းကိုချွတ်ပွတ်တိုက်အကြံပြုပေမယ့်ငါ့ထံသို့ပြန်သွားကြသည်မှအကောင်းတစ်လမ်းနဲ့တူပုံရသည်။ ငါအရှိဆုံးမိန်းကလေးငယ်များ / ယောက်ျားတွေသင်သည်သင်၏ Mojo ပြန်ရဖို့အကြိမ်အနည်းငယ်ယူပြီးနှင့်အတူဒဏ်ငွေပါလိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။ ရုံသငျသညျအပျြောအပါးသူမ၏ / သူ့ကိုတခြားနည်းလမ်းတွေထဲကသိသောသေချာအောင်! လိင်ယခုငါမှန်မှန် fapping အခါငါ့ယခင်ဆက်ဆံရေးအတွက်လုပ်ခဲ့တယ်ထက်အများကြီးပိုကောင်းအံ့သြဖွယ်ခံစားရ၏။
ငါနေသမျှကာလပတ်လုံးငါတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းအဘို့အ nofap ဆက်လက်သွားခဲ့ပါသည်, ထိုအစီအစဉ်မှာအားလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်မရှိသေးပေသောငါ၏နောက်ဆုံး update ကိုကပြောသည်။ ငါတောင်မဆိုပိုပြီး fapping စဉ်းစားကြဘူး, ဒါကြောင့်နောက်တဖန် fapping စတင်ရန်ခံထားပါလိမ့်မယ်နဲ့တူပါကခံစားရပါတယ်။ ငါ fapped တဲ့အခါမှာဒါရှက်စရာပြန်ခံစားနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုအကြှနျုပျအပျေါ၌ကျင်လည်မယ်လို့ကြောက်လန့်ဖြစ်ခြင်းသတိရပါ။ ကအခမဲ့ဖြစ်ကြီးမြတ်ခံစားရ!
ငါ nofap ၏တစ်နှစ်ကဲ့သို့ခံစားရသောအရာကိုတစ်ဦးတိကျဖျောပွခကျြပေး sensationalizing မရှိဘဲဤ update ကိုရေးသားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ဤ subreddit အပေါ်ပုံပြင်များဖှယျကိုဖတ်ရှုလာနိုင်ကြဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲဤဝေးကရာ၌ခန့်ထားပြီမဟုတ်ဘူးငါသည်လည်းသင်တို့၏ဖှယျပုံပြင်များအဘို့သင်တို့ရှိသမျှကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ Nofap တို့သည်ကြီးစွာသောအတှေ့အကွုံခဲ့နဲ့ကျွန်မအလွန်အမင်းကအကြံပြု!
TLDR: Nofap ပထမဦးဆုံးမှာခက်ခဲဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူကပဲပိုကောင်းလွယ်ကူရရှိသွားတဲ့!
LINK - တဦးတည်းကိုတစ်နှစ်တာအစီရင်ခံစာ!